Dhismaha Iskuul & Isbitaal, Hirgalinta Gaadiidka Caafimaadka, Caawinta Masaakiinta Danta Yar & Laba Wariye Oo Warbixin Cajiib Ah Kasoo Diyaariyay Waxqabadka Hay’adda Mohamed Salah Ee Nagrig (Qeybta 1-aad) - jornalizem
Dhismaha Iskuul & Isbitaal, Hirgalinta Gaadiidka Caafimaadka, Caawinta Masaakiinta Danta Yar & Laba Wariye Oo Warbixin Cajiib Ah Kasoo Diyaariyay Waxqabadka Hay’adda Mohamed Salah Ee Nagrig (Qeybta 1-aad)
Mohamed Salah, hadal heyntiisa kama dhamaadaan shabakadaha caalamka, waxaana hubanti ah inuu saameyn ku yeeshay guud ahaan saxaafadda caalamka iyo jamaahiirta kubadda cagta.
Shabakadda The Sun lana mataan ah wargeyska kasoo baxa Ingiriiska ayaa sameysay talaabo wax ku ool ah kadib markii laba wariye oo masaari ah ay u dirtay tuulada Nagrig si ay usoo ogaadaan sida uu Mohamed Salah u caawinayo dadka ku nool halkii uu ku dhashay – waxeyna kasoo diyaariyeen warbixin cajiib ah.
Mahmoud Elsobky iyo Hani Yassin oo ah laba wariye oo Masaari ah ayaa xogtaan soo aruuriyay halka Tom Sheen oo ka mid ah qorayaasha The Sun uu warbixintaan kusoo xariiqay shabakadda.
DHISMO QABYO AH: Dhismahaan waxaa dhisaya hayadda Mohamed Salah waxaana laga rabaa xarun caafimaad oo ay adeegyo ku helaan dadka tuulada Nagrig.
25-jirka u dhashay dalka Masar wuxuu soo maray marxalado kala duwan min Basel, London, Roma ilaa hadda oo uu ku sugan yahay Merseyside – waxaan arki doonaa sida ay tahay nolosha tuuladiisa iyo waxqabadkiisa ku aadan halkaas.
Xilli ciyaareedkaan wuxuu ka yaabsaday dunida , wuxuu 90,000 kun ka qaataa Anfield iyadoo lagu qiimeeyo 200 Malyan oo Pound iyadoo lagu jaangoynayo sicirka suuqa iyo sida uu aduunyada isku baray, balse cidna ma oga sida uu u hormarinayo dadka Nagrig.
GURIGA: Halkaan waa guriga uu kusoo koray Mohamed Salah caruurnimadiisii.
Labadiisa waalid waxey u shaqeeyaan dowladda, halka aabahiis uu ka gacansan jiray ubaxyada, waliba ubaxyada cad-cad ee lagu qurxiyo guryaha.
Salah sida aan anaga ku riyooneyno hadda wuu ka hanti badan yahay, balse wuxuu u adeegsadaa si quman isagoo mar walba nolol qurux badan u raadiya dadka tuuladiisa.
DHISME ISBITAAL: Waa mid ka mid ah shaqaalaha dhismaha Isbitaalka ay hay’adda Mohamed Salah ka hirgalineyso Nagrig. Wali lama dhameynin
Sidoo kale Salah wuxuu bixiyay qalabka caafimaad iyo sahay kala duwan – sidoo kale wuxuu u iibiyay mashiin maalintii 50 qof loogu adeegi karo.
Sidoo kale warbixinta ay The Sun soo sameysay waxaa lagu qeexay inuu tuuladiisa ka hirgaliyay markii ugu horesay gaadiidka gurmadka deg-degga ah, isagoo iibiyay gawaari xawaare leh oo dadka loogu adeego.
Sidoo kale hay’adiisa waxey dad badan oo tuulad adagan ka caawisaa waxyaabaha sida weyn loogu baahan yahay ee nolosha la xiriira, 3,500 Pound ayuu ku bixiyaa bishii.
Xiddiga Liverpool, sidoo kale wuxuu maalgaliyay dhisme ay leeyahiin dhalinyarada, iskuul gabdhaha ah iyo xarumo caafimaad.
Tuuladiisa hadda waxaa looga yaqaanaa Mohamed Salah “Midkii dadka ka farxiyay”
SAWIRADA ISKUULKA GABDHAHA:
The Sun waxey sidoo kale qirtay in si ay u hubiyaan wax walba oo la sheegay ay fadhi la yeesheen duqa Nagrig ahna madaxa fulinta hay’adda Mohamed Salah Maher Shatiyah.
“Salah waa shaqsi nadiif ah, inkastoo uu caan noqday, hadana waligiis ma iloobin waxa ku saabsan xaafadiisa” ayuu yiri Shatiyah.
“Wuxuu sameeyay nuucyo badan oo caawinaad ah, ugu horreyntii wuxuu sameeyay xarumo cunto oo hoos yimaada dagmada, sidoo kalana gaadiidkii ugu horeeyay ee gurmadka ayuu hirgaliyay” ayuu mar kale yiri.
Halkani waa xarunta ciyaaraha ee Nagrig – waxaana loogu magac daray Mohamed Salah, taasoo ka dhigan iney dadka magaalada aad u sharfeen.